Lanzarote, agwaetiti nke ọkụ na oké osimiri | Akụkọ Njem
Lanzarote, agwaetiti nke ọkụ na oké osimiri
Enwere ike iwere Lanzarote dị ka agwaetiti nke nwere ihe niile. Ọ na-ezukọta oke osimiri dị egwu, ihu igwe na-adọrọ adọrọ, obodo ndị mara mma, ogige mba na ebe pụrụ iche ugwu mgbawa nke rụworo ọrụ na netwọkụ Unesco nke Geoparks. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, na 1993 e kwupụtara ya dị ka ebe nchekwa ihe ndụ ụwa. Ezigbo ihe ngọpụ iji pụọ ma mata ya.
Ọtụtụ ndị njem na-ejikọ ya na nnukwu ụlọ oriri na nkwari akụ mana oge na-agbanwe na Ọtụtụ ndị njem nọọrọ onwe ha na-abịa Lanzarote iji nwee obi ụtọ n'okike n'ụdị ya dị ọcha. N'ụzọ dị otú a, gọọmentị na ntọala dị iche iche na-akwalite nchekwa nke agwaetiti ahụ, ọdịnala ya na iguzosi ike n'ezi ihe nke ụlọ.
1 Mmalite nke aha Lanzarote
5 Museumlọ ụgbọ mmiri okpuru mmiri nke Lanzarote
Mmalite nke aha Lanzarote
Iji kwuo maka Lanzarote, ka anyị bido n’isi aha ya. Dị ka ọ dị na America na Americo Vespuccio, ọ bụ onye ọrụ ụgbọ mmiri Genoese nke aha nna ya kpọrọ agwaetiti ahụ. Aha ya bụ Lancelotto Malocello ma biri n'ime ya afọ 20 site na 1339 yana ụmụ amaala Mahos.
Anyị ga-amalite njem na Costa Teguise, karịa ma ọ bụ obere na etiti agwaetiti ahụ, obodo ochie ịkụ azụ nke hiwere na 1415 n'ime obodo iji chebe onwe ya pụọ ​​na mwakpo ndị ohi. Ugbu a ọ dịla otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya kachasị mma na Lanzarote maka amara ya, oke osimiri ya mara mma na obi iru ala nke a na-eku ume na mpaghara a.
Egwuregwu na ndị hụrụ ecotourism ga-ahụ na Costa Teguise ebe dị mma iji nwee ezumike kwesịrị ekwesị. Egwuregwu ya na-agụnye ihe omume ụgbọ mmiri: o nwere ogige mmiri, ọtụtụ ụlọ akwụkwọ windurfing na ụlọ akwụkwọ mmiri n'akụkụ Las Cucharas beach na Avenida del Jablillo.
Famara bụ osimiri kachasị mma na oke osimiri na obodo Teguise. Ọ na-amalite n'obodo La Caleta de Famara ma gbasaa ruo ọtụtụ kilomita ruo na mkpọda Risco de Famara dị egwu. Uzo ikuku di iche iche emeela dunes di nkpa na obere ahihia ma n'etiti ha ndi na-asa aru na-ezu ike n'ehihie n'anyanwu di nma.
N'agbanyeghị na ọ bụ osimiri na-ewu ewu, Famara anaghị ejupụta. Ọ bụ ụsọ osimiri ebe ebili mmiri na ikuku na-adịkarị ya mere ọ dị mma maka ịme ọrụ ụgbọ mmiri dịka sọọfụ, ịba ahụ, kitesurfing ma ọ bụ windurfing. Ọ bụkwa ihe a na-ahụkarị ịhụ ndị na-agba ọsọ na ndị ngagharị nke a na-ebido n'elu Famara massif ka ha fefere osimiri a dị egwu ma tụgharịa uche maka ọdịdị mara mma dịka nnụnụ.
Ihe dị ka nkeji 45 ọdịda anyanwụ, na obodo Yaiza bụ Timanfaya National Park, nke atọ kachasị eleta na Spain. Ọnụ ụzọ nke ebe ahụ na-efu euro 9 ma na-agụnye njem ụgbọ ala nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu awa na nchedo nke na-akọwa ọdịdị ala mgbawa na mgbawa ndị bibiri agwaetiti ahụ n'etiti 1730 na 1736. Omume ndị ahụ gbanwere ókèala ama maka ihe ubi ya wee hapụ ala ọnwa.
Busgbọ ala ahụ na-agafe Ugwu Ọkụ na Ugwu Rajada. Site na ya gbara gburugburu agwaetiti nke Hilario, na-ahapụ Caldera del Corazoncillo, ugwu Rodeos na Senalo, Pico Partido na, karịrị nke ahụ, Caldera de la Rilla n'aka nri.
Na Timanfaya National Park ị nwere ike ịhụ ọnọdụ ihu igwe na-adịghị ahụkebe nke sitere na ala mmiri na nke okwute jiri gbaa ọkụ, alaka ya na-ere ọkụ na mmiri na-agbapụ n'ụdị grey.
Uzo ozo iji gaa na Timanfaya National Park bu ime uzo uzo Tremesana. Ọnụọgụ nke ebe a ga - ejegharị n'ime ogige ahụ pere mpe maka ebughi oke ugwu na uru obibi obibi nke gafere. Iji mee ndoputa ị ga-akpọ otu ọnwa tupu oge wee kwado ọzọ otu izu tupu ọrụ ahụ. Zọ a dị kilomita atọ na ọkara n’ogologo ma were ihe dị ka awa abụọ, yabụ na-aga n’ihu n’ụzọ dị jụụ.
N'oge ụzọ Tremesana ndị nduzi na-akọwa ma gosipụta echiche ndị gbara ọkpụrụkpụ banyere ugwu mgbawa. Narị afọ atọ ka ọ gbasachara nke mbụ, ọ dịghị ahịhịa ọ bụla dị n'oké osimiri a nke okwute.
Museumlọ ụgbọ mmiri okpuru mmiri nke Lanzarote
Agwaetiti nke Lanzarote bu ulo izizi ihe mgbe ochie na EuropeOnye Britain bụ eco-sculptor Jason deCaires Taylor. Museo Atlántico Lanzarote dị na mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ nke agwaetiti ahụ, na oghere dị nso na Las Coloradas na obodo Yaiza, bụ nke na-ezute ọnọdụ kachasị mma maka nrụnye ya ebe ọ na-echebe ya site na nnukwu mmiri mmiri na-emetụta ụsọ oké osimiri ugwu ugwu .
N'etiti narị afọ nke XNUMX, Arrecife ghọrọ isi obodo Lanzarote, na-achụpụ Teguise. Arrecife ka na-ejigide ọmarịcha obodo nta ndị nwe obodo n'agbanyeghị eziokwu ahụ na n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ ụlọ ụrọ agwaetiti ahụ apụọla n'anya. Agbanyeghị, agwa mmiri ya mara ama dị n'oge niile yana ọrụ akụkọ ihe mere eme dị ka ebe ewusiri ike nchebe.
Na obodo ochie ya, a na-ahụ ọkwa ya dị ka obodo ụgbọ mmiri na azụmahịa na ngwongwo na-adịghị agwụ agwụ na-abịa site na ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ, dị na ụlọ ahịa ya ọ bụla. Uzo ozo nke njikọ nke mmiri ya bụ ụka nke San Ginés, onye nchebe nke Arrecife.
N'etiti ebe nlegharị anya nke Arrecife nwere, anyị nwere ike ịkọwa ụlọ nchedo ya (Castillo de San Gabriel na Castillo de San José, taa gbanwere na International Museum of Contemporary Art (MIAC)). Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị bụ ụlọ El Almacén ,, nke na-enyekarị ihe ngosi nka.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka osimiri, Arrecife nwere osimiri Reducto, nke enyere ya na ọkọlọtọ na-acha anụnụ anụnụ nke European Union. N'aka nke ọzọ, na nso ụka San Ginés enwere ụdị ọdọ ọdọ mmiri guzobere n'ọnụ ụzọ mmiri mmiri, ebe obere ụgbọ mmiri na-ezu ike n'ihu ụlọ ndị ọkụ azụ, ebe enwere ike ịghọta akara ụkwụ nke onye omenkà César Manrique.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Lanzarote, agwaetiti nke ọkụ na oké osimiri
Ihe nkiri 10 na-eme ka ịchọrọ ịga njem